Ihe isi ike nke teknụzụ, biko kwụrụ | Martech Zone
Banyere peeji nke ebe m na-edebe akwụkwọ, o doro anya na agbanweela m isiokwu m ruo ugbu a na ọ naghịzi arụ ọrụ dịka e mere ya na mbụ Ntughari beta isiokwu. Amaghị m mgbe m mere ya, mana ọ gbadatala izu ole na ole ugbu a. (Psst… hey Squible guys… biko malite ihe n'oge na-adịghị anya… kemgbe beta ruo mgbe ebighị ebi!)
Agbalịrị m plethora nke WordPress plugins maka ebe nchekwa. Offọdụ n'ime ha mara mma na-adọrọ mmasị, dị ka Simile usoro iheomume ngwa mgbakwunye. Enwere m ya ma na-agba ọsọ n'abalị ụnyaahụ mana achọpụtara m na ọ na-ebugharị ALL nke posts n'otu nkwụsị na-egbu egbu. Argh.
Enwere m ihe karịrị narị atọ na saịtị a ka nke ahụ wee wulite arịrịọ faịlụ ogologo anụ maka onye ọ bụla gara. M gbanwetụrụ koodu nnọọ a bit na-ewu a caching usoro. Nke ahụ kpochapụrụ data nchekwa data niile mana ọ ka dị oke aka iji kwado maka onye ọ bụla debanyere aha. Dị ka o kwesịrị, ngwa mgbakwunye ahụ kwesịrị iji usoro iji Dị mfe API iji weghachite ihe omume dị ka usoro iheomume na-akpali. Aga m eche na nke ahụ!
N'ihi ya, echere m na m ga-ewu nke m. M na-toying na ụfọdụ echiche na otú ugbu a… ikekwe a mma osisi ụdị edinam si afọ, ọnwa, biputere. Anyị ga-ahụ. Ana m arụ ọtụtụ ọrụ isiokwu maka ọrụ ọzọ na ngwụsị izu a ka m wee laghachi na nke a.
Ka ọ dị ugbu a, saịtị m nwere ike ọgaghị enwe ihe ọhụụ n'ihi na ebe anaghị edebe ihe ochie. Anyị ga-enweta ndị hits azụ, ezie! Biko kwụrụ n'akụkụ.
Jenụwarị 1, 2007 na 5:51 PM
M n'ezie wụnye na otu dị ka nke ọma. Ana m agbalị iji nweta ihe na obere ihe saa mbara… a lee anya http://binarybonsai.com/archives/
Ọ mara ezigbo mma.